लक्ष्मिपुर कोरेन्टाइनमा २९ जना « Farakkon
लक्ष्मिपुर कोरेन्टाइनमा २९ जना
प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख १२ गते शुक्रवार
लहलौरा, बैशाख १२ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १६ नं. वडामाको सामुदायिक होम कोरेन्टाइनमा शुक्रवारसम्म २९ जना बसेका छन् । क्वारेन्टाइनमा काड्माडौं, पोखरा,नुवाकोट लगायतका स्थानबाट आएका ९ जना महिला र २० जना पुरुष बसेका छन् ।
कोरेन्टाइन ब्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र केसीले बैशाख ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको जानकारी दिए । दुई हप्तासम्म क्वारेन्टाइनमा राखेपछि स्वास्थय चेकजाँच गरेर उनीहरुलाई घर जान दिइने वडा अध्यक्ष भूपबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
उनीहरुलाई विहान ८ बजे चिया, अण्डा र चना, ११ बजे खानामा दाल भात तरकारी, दिउँसो ३ बजे चिया विस्कुट तथा नास्ता र बेलुका ६ बजे खाना खाने समय तय गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामाग्री स्थानीय दाताहरुले उपलब्ध गराइरहेका छन् । बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघले १० जार पिउने पानी , तुलसीपुर नगरपालिकाबाट १ सय २५ केजी चामल, ५ केजी नुन, एक थान नेट, १० वटा साबुन उपलब्ध गराएको छ ।
घोराही उपमहानगरले राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई दियो ५० अक्सिजनका सिलिण्डर
तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना परीक्षण सुरु
कोरोना सङ्क्रमणबाट बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी जोगाउने ?
प्रेसरले हानेर थलिएका चन्द्रलाल फिजियो थेरापीले तंग्रिदै
कोईलाबास नाकामा हेल्पडेष्क स्थापना